စေ့စပ်ဖြန်ဖြေခြင်း အနုပညာ – ပြင်းရှတဲ့ ၀ိုင်တစ်ခွက်ပေါ့
This entry was posted in စိတ်ထဲရှိသမျှ, ဟိုဟိုဒီဒီ and tagged Life, negotiation, neutral. Bookmark the permalink.
← Utility ပြီးတော့ Utilized
3 thoughts on “စေ့စပ်ဖြန်ဖြေခြင်း အနုပညာ”
MrDBA | February 8, 2009 at 3:41 pm
ုkom | February 8, 2009 at 4:15 pm
ကုမ်ရာသီသူ | February 9, 2009 at 1:08 am
အမ KOM ၊ Bro. ဒီဘီ… လည်လည်ရောက်လာတာ ကျေးဇူး